NetComplus | ကွန်ပျူတာ Shutdown ကျနေတဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများ
Posted on 14th January 2020 by NetComplus
ကွန်ပျူတာ Shutdown ကျနေတဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများ
Windows7နဲ့ အနိမ့်ဗားရှင်းတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ Windows Unexpected Shutdown ပြဿနာကြုံနေရသူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတတ်စေဖို့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ System File ပျက်စီးနေတာတွေ၊ ဆော့ဝဲလ်တွေထည့်တာ မမှန်ကန်လို့Files တွေ Corrupted ဖြစ်နေတာတွေ၊ Registry File ပျက်စီးနေတာတွေ စသည့်ဖြင့် ကွန်ပျူတာ System ပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်သော Files များ ပျက်စီးမှုများရှိ၊မရှိစစ်ဆေးဖို့၊ပျက်စီးမှုများရှိရင်လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်စေဖို့ System File Checker (SFC) နဲ့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မယ်။ Command Prompt ကို Admin နဲ့ဖွင့်ပါ။ Cmd ဖွင့်လာပြီဆိုရင် sfc /scannow ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ sfc နဲ့ /scannow ကြားမှာ Space ခြားပါ။ 100 % ပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပါ။ မိမိကွန်ပျူတာမှာ System File တွေပျက်စီးမှုရှိခဲ့ရင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဥပမာလိုမျိုး ပြလာမယ်။
“Windows Resource Protection found corrupt files and successfully
repaired them. Details are included in the CBS.Log windir\_Logs\_
CBS\_CBS.log. For example C:\_Windows\_Logs\_CBS\_CBS.log. Note
that logging is currently not supported in offline servicing scenarios.”
ဘာပျက်စီးမှုမှ မရှိရင် အောက်ကဥပမာလိုမျိုး ပြလာမယ်။
Sfc /scannow နဲ့စစ်ဆေးမှုပြီးသွားရင် စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။ Sfc /scannow အနောက်မှာ တစ်ခြား command တွေ ထပ်ထည့်ပြီး စစ်ဆေးတဲ့နည်းတွေ ကျန်ပါသေးတယ်။ မလိုအပ်ဘူးထင်လို့မရေးတေ့ာပါဘူး။
ကွန်ပျူတာက ဘာမှမသုံးလိုက်သေးဘူး။ Program တစ်ခုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Unexpected Shutdown Message box ပဲ တက်နေတယ်ဆိုရင် Services တွေကို Disable လုပ်ထားလိုက်ပါ။ Run box မှာ msconfig ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ System Configuration box ပေါ်လာရင် Services Tab အောက်ကို ဝင်လိုက်ပါ။ အောက်ဆုံးမှာ Hide All Microsoft Services ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ထားပါ။ တစ်ခြား Services တွေကို ပိတ်လို့ရပေမယ့် Microsoft Services တွေကိုတော့ ပိတ်လို့ မရဘူးနော်။ Windows သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Services တွေတေ့ာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ Microsoft Services တွေကို Hide All လုပ်ထားပြီးရင် ကျန်တဲ့ Program Servers တွေကို Disable ပေးပြီး Ok နှိပ်၊ စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။
Windows Unexpected Shutdown ပြဿနာကို နောက်ထပ်မဖြစ်စေဖို့ Startup and Recovery မှာလည်း ပိတ်ထားနိုင်တယ်။ This PC\_My Computer ကို Right Click\_ Properties ကို နှိပ်ပြီး System Properties ထဲဝင်ပါ။ Windows Key နဲ့ Pause Break Key ကို တွဲနှိပ်ရင်လည်းရတယ်။ System Properties မှာ System Protection ထဲကိုနှိပ်ဝင်ပါ။ System Protection\_Advanced Tab အောက်က Startup and Recovery မှာ Settings ထဲဝင်ပါ။ System Failure အောက်မှာ နှစ်ခုစလုံးကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်၊ Write Debugging Information မှာ None ကို ရွေးထားပြီး OK နှိပ်ထွက်၊ စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။
ကွန်ပျူတာ System Hardware က မထောက်ပံသော Driver တွေ ထည့်ထားမိရင်လည်း Windows Unexpected Shutdown ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိမိကွန်ပျူတာမှာ Driver မရှိတိုင်း တွေ့သမျှ Drivers တွေကို Install မလုပ်ပါနဲ့။ မိမိစက်နဲ့ကိုက်လား၊ Windows Version ဘာလဲ၊ 32 or 64 bit လား။ Install လုပ်မယ့် Driver တွေကော မိမိစက် Windows Version နဲ့ ကိုက်ညီမလား စစ်ကြည့်ပြီး Install လုပ်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ Motherboard ထုတ်တဲ့ ကုမ္မဏီလည်းမတူပဲနဲ့ ACER Laptop Driver ကို AUSU စက်မှာ လာပြီး Install လုပ်လို့မရဘူးနော်။ Driver Pack Solution နဲ့Driver တွေ သိတယ်ဆိုတိုင်း Install လုပ်လို့မရဘူး။ စက်နဲ့ Driver နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမှ စက်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Device တွေလည်း ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်။ စက်ကမော်ဒယ်မြင့်ပြီး Driver တွေက Supported မလုပ်တော့တဲ့ Incompatible Driver တွေကို Install လုပ်ထားမိရင် Run box မှာ devmgmt.msc ကိုရိုက်ထည့်၊ Enter နှိပ်၊ Device Manager ထဲဝင်၊ မကိုက်ညီသော Driver တွေကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး စက်မော်ဒယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် Drivers တွေကို ရှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ Install ပြန်လုပ်ပါ။
Third-Party Antivirus Programs တွေကို ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ Windows Defender ကလွဲပြီး တစ်ခြား Third-Party Antivirus Software တွေ တစ်ခုမက ထည့်ထားရင်လည်း Windows has Recovered from an Unexpected Shutdown Error ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Windows Defender ကို နေ့တိုင်းUpdateလုပ် နေရင် တစ်ခြား Antivirus Software တွေ မလိုအပ်ပါဘူူး။ အခုနောက်ပိုင်း Windows Update တွေထဲက Defender က ပိုပြီး အဆင့်မြင့်လာတယ်။ Security Feature တွေ ပိုပြီး စုံလင်လာတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာ Defender Update အကြောင်း သီးသန့်ပြန်ရေးတင်ပါမယ်။ အခုသုံးနေတဲ့ လက်တော့ပ်ကို စဝယ်ကတည်းက မည်သည့် Antivirus Software ကိုမှ Install မလုပ်သေးဘူး။ Windows Defender ကိုပဲ အမြဲ Update လုပ်ပြီး သုံးနေတယ်။
Windows has Recovered from an Unexpected Shutdown Error ဖြစ်နေရင် လက်ရှိဖွင့်သုံးနေတဲ့ Programs အားလုံးကို ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်သုံးပါ။ ပိတ်လို့မရရင် Task Manager ထဲဝင်ပြီး ပိတ်မယ့် Program ကို Right Click နှိပ်ပြီး End Task လုပ်လိုက်ပါ။
ကွန်ပျူတာမှာ ထည့်သုံးနေတဲ့ External HDD, USB Stick, Memory Stick, Mice, Keyboard,Mouse စသည်တို့ခဏဖြုတ်ထားပြီး ပြန်တပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ USB Driver တွေကို တိုက်ရိုက်ဆွဲဖြုတ်တာမဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီ Drive ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်၊ Eject လုပ်ပါ။ Eject မလုပ်ပဲ တိုက်ရိုက်ဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင် နောက်ကွယ်မှာ USB Driver က အလုပ်လုပ်နေသေးတဲ့အတွက် ပြဿနာတွေ ကကျိုးကကြောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ Driver မကိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခြားပြဿနာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘေလ် ငါးထောင်လောက်ထည့်ပြီး ကွန်ပျူတာကို Update လုပ်လိုက်ပါ။ Update လုပ်လိုက်ခြင်းက ပြဿနာပေါင်း 95 % ကို ဖြေရှင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
Troubleshooting ကို Run ပေးလိုက်ပါ။ Control Panel\_All Control Panel Items\_ Troubleshooting ထဲကို တစ်ဆင့်ချင်းဝင်ပြီး System&Security ကို နှိပ်ဖွင့်လိုက်ပါ။ Fix Problems with Windows Update ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ Next နှိပ်ပါ။ Try Troubleshooting As An Administrator ကိုနှိပ်ပါ။ သူပြောထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ Apply Fix ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပြီး စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။
SmartPCFixer ကို ဒီနေရာကကနေ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ၊ Install လုပ်ပြီး Run ပေးလိုက်ပါ။
CategoriesComputer, Linux, System, Website, Windows
Previous PostPrevious ကွန်ပျူတာ Display အလုပ်မလုပ်သော ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများ
Next PostNext Windows 10 မတင်ခင် သိထားသင့်၊ လုပ်ထားသင့်တဲ့အချက်များ